Indlu kaTyler Perry ngoku iyikhaya leNkosana uHarry kunye noMeghan Markle
UMeghan Markle kunye neNkosana uHarry Chitha i-2nd Annivil ekwindlu yeTyler Perry ye-LA IIPHOTOS
Riziqendu zisandula ukubonwa Meghan Markle kwaye INkosana uHarry bebehlala e-US $ 18 yezigidi zexabiso eliphantsi kweBeverly Hills UTyler Perry. Ngokwabangena ngaphakathi, ngelixa esi sibini besixakeke ngumsebenzi ovela kwikhaya labo lethutyana, uMeghan noPrince Harry benze izicwangciso zokuthatha usuku ukuze babhiyozele usuku lwabo lwesibini lomtshato.
Esi sibini sitshatile eSt George's Chapel eWindsor kwiminyaka emibini eyadlulayo, nge-19 kaMeyi ngo-2018.
UMeghan kunye neNkosana uHarry baphuma ngaphandle njengendoda nomfazi okokuqala. Ifoto: Imifanekiso ka-Getty
Ukuhamba ngaphesheya komda
I-Duke kunye neDuchess yaseSussex kunye nonyana wabo oneminyaka ubudala, Archie bendihlala kuluntu olu-gated ukusukela ekufudukele e-LA ukusuka kwindawo ababeqashe kuyo eVancouver Island, eCanada. Iiroyali zangaphambili zenze intshukumo ngasekupheleni kuka-Matshi ngaphambi kokuba i-US ivale imida yayo ngenxa ye-coronavirus.
UMeghan noHarry abakaze babonwe kunye UTyler Perry, owaziwa kakhulu ngesimo sowasetyhini oselekhulile uMathoa. Kukholelwa ukuba umhlobo wabo omanyeneyo, Oprah Winfrey wenza unxibelelwano. Ngokucacileyo u-Oprah wayefuna ukunceda ekuqinisekiseni ukuba uMeghan kunye neNkosana uHarry banendawo entle yokuhlala ngelixa bekhangela ikhaya labo elingapheliyo. UTyler Perry okwangoku ngumntu ohlawulwa kakhulu kwezolonwabo.
Igumbi lokulala lama-12 lika-Perry, igumbi lokuhlala elinendawo yokuhlala yegumbi lokuhlala lika-2004, elathengwa emva ngo-22, lihlala kwii-ekitala ezingama-XNUMX encotsheni yenduli kwindawo ekhethekileyo yabakhenkethi eBeverly Ridge Estates. Ipropathi inesango layo labucala, ukubulawa kweekhamera zokhuseleko kunye ne-alarm-state-of-the alarm's system. Esi sakhiwo sihle sihle sibonisa ukuba esi sixeko sasemva kwendlu kunye nembono entle yokutshona kwelanga.
Ingaphakathi lendlu inamabhongo e-regal aesthetics equkethe iiyileriers ezinkulu, ipiyano enkulu, kunye neenkcukacha ezininzi zemabula kubandakanya i-archway kunye nekhitshi lasekhitshini. Iindonga ezisezindongeni zigqunywe kwiiphaneli ze-oki.
Amagqabantshintshi endlu enkulu yindawo yokuhlambela yaseRoma ephefumlelweyo ene-jacuzzi eyakhelwe phantsi emgangathweni. I-jacuzzi yakhiwe ngeeplanethi zemabula kwaye ngaphantsi kwe-chandelier enkulu.
Unyana ka-Meghan kunye neNkosana uHarry, u-Archie kufuneka athande ikhaya lakhe lokuqala laseMelika njengoko enesihlengo esihle esasihlala sonyana kaTyler Perry, Indoda. Igumbi lifaka isikimu sombala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye nomhlophe ngemigangatho yokhuni kunye nodonga olumhlophe. Igumbi lize nengca emhlophe kunye nesihlalo esinamathele kunye netafile esecaleni.
Abalandeli bebesoloko bethontelana kwi-Instagram kaTyler Perry bekhangela amachaphaza asuka kwindlu enkulu ukuba abe nombono wokuba iiroyali zangaphambili zihlala njani ngoku.
Jonga amanye amashiti eMeghan kunye nekhaya lasePrince Harry ...
Iifoto ezindala zendlu ngeTyler Perry
Ityala lemifanekiso: Instagram | I-Tylerperry
Isibini esaziwayo Amakhaya abantu abadumileyo izindlu ezidumileyo Okufumaneka Meghan Markle umqondiso we-meghan kunye nenkosana yeharry INkosana uHarry intsapho yo bu kumkani UTyler Perry Indlu eTyler Perry